Fawsiya Xaaji Aden: Ha Loo Daayo Arimaha Jubaland Somaliya – Rasaasa News
May 25, 2013 Puntland, somali region, somalia, south afrika
Mogadishu, May 25, 2013 – Wasiirada aan cidna wakiilka u ahayn ee dhax socota maamulka Xamar ayaa VOA-da mar ay lahadlaysay tidhi waxaan IGAD ka codsanay “in arimaha Jubaland state looga dambeeyo dawlada somaliya.” Waxaan qabaa in Fawsiya ay ka dhacsan tahay afkeeduna uu ahaa in ay tidhaahdo “Somaliland waa maamul ka tirsan Somaliya.”
Fawsiya waxay ku magacaaban tahay wasiirka arimaha dibada ee Somaliya, waxay dhawr sano ka hore u ololaynaysay go,itaanka Somaliland, waxaanan aaminsanahay in ayna wali ka tanaasulin go,itaanka Somaliland.
Jubaland State waxaa uu ka mid yahay Somaliya diyaarna uma aha in uu ka go,o dalka Somaliya. Dalka Somaliya waa federaal sida ku qoran dastuurka. Taas macnaheedu waxaa weeye masuuliyiinta xilalka ka haya dawlada Somaliya waxay wakiil ka yihiin degaanka ay ka yimaadeen.
Waxaan ognahay in Jubaland State dadka dega ay dhisteen dawlad gabaleed hoostagta dawlada dhexe ee Somaliya. Waxaana uu khilaaf ka dhexe socday dawlada dhexe iyo maamulka hanaanka loo dhisayo maamulka.
Fawsiya waxay aad ugu dhiiran tahay hadalada deelqaafka ah ee ay u gaysanayso maamulada Somaliya ee Jubaland. Arinkaas oo aan ku haboonayn iyada iyo ruux la mid ah.
Waxaa ka mid ah hadalada qiiradu ka keentay markii ay VOA-du waraysanaysay oo ahaa “sidii aanu rabnay ayey inoo noqotay.” Maxay ahayd sida ay rabeen, yaase ku weheliya sida ay fawsiya rabtay. Hadalkaas waxaa uu u muuqdaa hadal ka qoto fog maamul u samaynta Jubaland State.
Maamul Gabaleedka Gal-mudug oo Heshiis Shidaal Baaris ah la Galay Shirkado